လုယက်မှု – Eleven Media Group
ဘားအံမြို့ပေါ်တွင် နေ့ခင်းကြောင်တောင် လုယက်မှု မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေ
Posted on September 12, 2018 September 13, 2018 by စိုးစိုး (ဘားအံ)
ဘားအံမြို့ပေါ်တွင် နေ့ခင်းကြောင်တောင် လုယက်မှု အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်နေ၍ ဒေသခံများ၏ လုံခြုံမှုအနေအထားအရ စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
“ဘားအံမြို့က နယ်စပ်မြ၀တီနဲ့ နီးစပ်နေတဲ့အတွက် အနယ်နယ်ကလူတွေ နေထိုင်မှု များပြားလာတာ တွေ့ရတယ်။ ဘားအံမှာ လူဦးရေထူထပ်လာသလို ဒုစရိုက်မှုတွေ ပိုမိုဖြစ်ပွားလာတာ တွေ့ရတယ်။ မနေ့က ကျွန်တော့်အသိတစ်ယောက် မြို့ထဲကနေ ပြည်ထောင်စုဘက်ကို ဆိုင်ကယ်စီးပြီးအလာမှာ နောက်ကဆိုင်ကယ်တစ်စီးကပ်လိုက်လာပြီး ခါးကြားမှာထိုးထားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်လုယူပြီး မောင်းပြေးတာ လိုက်လို့မမီလိုက်ဘူး။ ဟိုတစ်ပတ်ကလည်း နေ့ခင်းကြီး သီရိလမ်းမပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်လာတဲ့ ကျောင်းဆရာမ စလင်းဘက်အိတ်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ အနောက်ကလာပြီး လုယူသွားသေးတယ်။ ဘားအံမှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် လုယက်မှုတွေဖြစ်နေတာ ကြာနေပြီ။ လုယူသူကို ဖမ်းမိတာတော့ မကြားမိသေးဘူး။ ဒီလိုလုယက်မှု သတင်းကြောင့် ကန်သာယာညဈေးတန်းမှာ ညဘက် မုန့်လာဝယ်စားသူ နည်းသွားတယ်” ဟု ဘားအံမြို့ခံတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“လုံခြုံရေးကို ပိုပြီးလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ ကရင်ပြည်နယ်မှာ နယ်စပ် မြ၀တီပြီးရင် ဒုစရိုက်အများဆုံး ဖြစ်ပွားနေတာက ဘားအံမြို့ပဲ။ ဘားအံမှာ ရှာစားဖွေစား လွယ်ကူတဲ့အတွက် အနယ်နယ်က လာရောက် အခြေချသူတွေ များလာတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ကရင်ပြည် နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး အောင်မြတ်မိုး၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ရပ်ကင်း၊ လှည့်ကင်း၊ ၀ပ်ကင်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မြို့ဝင်ဂိတ်များတွင်လည်း ရှာဖွေစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
Posted in Crime, NewsTagged လုယက်မှုLeaveaComment on ဘားအံမြို့ပေါ်တွင် နေ့ခင်းကြောင်တောင် လုယက်မှု မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေ
Posted on September 5, 2018 September 6, 2018 by အောင်ကျော်မျိုး (ဟင်္သာတ)
လှည့်ကင်း၊ ရပ်ကင်း၊ ၀ပ်ကင်းများ၊ မြို့ဝင်ဂိတ်များ၌ ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ရစဉ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့၌ ခိုးမှုနှင့် လုယက်မှုများ ဖြစ်ပွားမှုများလာသဖြင့် လုံခြုံရေးအတွက် ဒေသခံများ စိုးရိမ်လျက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ခိုးမှုနှင့် လုယက်မှုများမှာ ညပိုင်းအချိန်တွင် အဓိက ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပြီး ဟင်္သာတမြို့လယ်ကောင်နေရာများ၌ပါ ဖြစ်ပွားမှုရှိလာကြောင်း သိရသည်။
“မြို့မှာ လုယက်မှုတွေဖြစ်တာ စိပ်လာတယ်။ ဒေသခံတွေအနေနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ရှိနေပါတယ်။ အ.ထ.က (၁) ကျောင်းရှေ့နားမှာဆိုရင် G.T.C ကျောင်းသားနှစ်ယောက် အလုခံရပြီး အရိုက်ခံရတယ်။ တစ်ယောက်က ဆေးရုံရောက်သွားတယ်။ ရွာသာကုန်းဘက်မှာလည်း မကြာသေးခင်က အလုခံရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၀တစ်လုံး ရွှေပြည်အေးဘက်မှာလည်း သုံးကြိမ်သုံးခါ အလုခံရတယ်။ ည ၆ နာရီကျော်ကနေ ၈ နာရီအတွင်းပေါ့။ လုတဲ့ပုံစံက နောက်ကနေ ဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်ပြီး ရှေ့က စက်ဘီးစီးတဲ့လူတွေကို လုတာပေါ့။ ခါးက ပိုက်ဆံအိတ်တို့၊ ဖုန်းတို့၊ ခြင်းထဲက ပိုက်ဆံအိတ်တို့ကိုနှိုက်ပြီး လုတာပေါ့” ဟု မြို့ခံကိုသာထွန်းအောင်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်၍ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ မေးမြန်းခဲ့ရာ ဆိုင်ကယ် ပျောက်ဆုံးမှုများ၊ လုယက်မှုများ ဖြစ်ပွားမှု စိပ်လာသဖြင့် ရပ်၊ ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ လုံခြုံရေး ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း ဖြေကြားသည်။
“ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုလည်း ရပ်ကွက်တွေရော၊ ကျေးရွာတွေ ရောမှာ လုံခြုံရေးကို ပိုပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ကိုယ့်တစ်ဖွဲ့တည်း မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ၀န်ထမ်းတွေနဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ နေ့ခင်းတွေတင်မဟုတ်ဘဲ ညမှာဆိုရင်လည်း မြို့ဝင်မြို့ထွက်ဂိတ်တွေမှာလည်း စောင့်ကြပ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၇၀ လောက်နဲ့ စက်ကွန်ရက်နဲ့ အဆက်အသွယ် လုပ်ပါတယ်။ ဘယ်မှာတော့ ဘယ်လိုထူးခြားမှုတွေ ရှိနေတယ်။ ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်လိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမယ် စသဖြင့် ဒါကိုလည်းပဲ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်နေပါတယ်။ ထူးခြားတာရှိရင်လည်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ စခန်းမှူးတို့နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ရဲနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်” ဟု ဟင်္သာတမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းနိုင်က ပြောကြားသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်သည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား လက်နက်များ ထုတ်ပေးကာ အင်အားတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နေပြီး လှည့်ကင်း၊ ရပ်ကင်း၊ ၀ပ်ကင်းများ၊ မြို့ဝင်ဂိတ်များ၌ ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယခင်ဆောင်ရွက်တာထက်ပိုမိုပြီး အင်အားတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း ခေတ်မီလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်း စနစ်တကျ ထုတ်ပေးပြီး အင်အားတိုးမြှင့်ပြီး လှည့်ကင်း၊ ရပ်ကင်း၊ ၀ပ်ကင်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဂိတ်တွေမှာလည်း ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လုံခြုံရေးကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်” ဟု ဟင်္သာတမြို့ အမှတ်(၁) မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအုပ်ထိန်လင်းက ဆိုသည်။
ဟင်္သာတမြို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လုယက်မှုများ၊ ခိုးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း တာဝန်ရှိသူများထံ အသိပေး တိုင်ကြားမှုများ ရှိနေပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှလည်း စုံစမ်းလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged လုယက်မှုLeaveaComment on ဟင်္သာတမြို့၌ ခိုးမှုနှင့် လုယက်မှု များလာသဖြင့် ဒေသခံများ လုံခြုံရေး စိုးရိမ်နေကြ
ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် သေနတ်ပြပြီး iPhone နှစ်လုံး လုယူမှုဖြစ်ပွား
Posted on September 1, 2018 September 2, 2018 by ထွန်းလင်းအောင် (မြစ်ကြီးနား)
အခင်းဖြစ်ရာ လုံးခင်းကျေးရွာ လမ်းမကြီးနှင့် ဖုန်းဆိုင်ကို တွေ့ရစဉ်
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် သြဂုတ် ၃၁ ရက် ညပိုင်းက သေနတ်ပြပြီး iPhone နှစ်လုံး လုယူမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သြဂုတ် ၃၁ ရက် ည ၈ နာရီ ခန့်တွင် ဖုန်ကာမျက်နှာ အုပ်ထားသည့် အမျိုးသားနှစ်ဦးသည် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လုံးခင်းကျေးရွာရှိ ဦးချိုဖုန်းဆိုင်တွင် ဖုန်းဝယ်ဟန်ဆောင်ပြီး ငွေရှင်းချိန်တွင် သေနတ်ထုတ်ပြသဖြင့် ဆိုင်ရှိအရောင်းစာရေးမများမှာ ထွက်ပြေးသဖြင့် ကျပ်ငွေ ၁၅ သိန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ iPhone နှစ်လုံးယူဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
လုံးခင်းကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးက “ဒီလိုဖြစ်တာက မနှစ်က ရိန်းဘိုးတရုတ်ဆိုင်မှာလည်း သေနတ်ပြပြီး ယူသွားပြီ။ မနေ့က iPhone နှစ်လုံးယူသွားတယ်။ လုံးခင်းမှာ ၁၀ တန်းတက်နေတဲ့ ကလေးမကို သတ်သွားတာလည်း တရားခံ မမိသေးဘူး။ ဒီမှာက မှုခင်းတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာ။ သေနတ်ပြတယ် ဆိုပေမဲ့ အတုလား အစစ်လား မသိရဘူး။ သေနတ်ထုတ်တာနဲ့ စာရေးမတွေက ပြေးကြပြီ။ အဲဒါနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ယူသွားတာ” ဟု ပြောကြားသည်။
ဖားကန့်ဒေသမှာ သေမှုသေခင်းတွေ ထူပြောနေကြောင်း ဒေသခံများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဆိုသည်။ ဖားကန့်ဒေသတွင် လုယက်မှု၊ ခိုးမှု၊ လူသတ်မှုများ နေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီး တရားခံများကိုလည်း ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ညအချိန်များတွင် အုပ်စုဖွဲ့ လုယက်ငွေတောင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ပြန်လည်ခုခံပါက အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စု ဆန်ခါကျေးရွာမှ ကိုကျော်က “ဒီမှာက ဆိုင်ကယ်ခိုး၊ အိမ်ဖောက်၊ ညဘက်လုတာက နေ့တိုင်းဖြစ်နေတာ။ လူတွေ ဒီလောက်များတော့ မထိန်းနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် ဒီရောက်တာ ကြာပြီး တစ်ရက်နဲ့ တစ်ရက် လူတွေက အုပ်လိုက်ရောက်လာတာ။ ဘယ်ကလာလို့လာမှန်း မသိဘူး။ အခု ဆန်ခါကျေးရွာဘေးမှာ လောင်းကစားဝိုင်း အစုံရှိတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး အစုံရှိတယ်။ နေ့တိုင်းကို ဆိုင်ကယ်ပျောက်နေတာ။ ရဲစခန်းမှာ မေးရင်လည်း တစ်မှုမှရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ အရင်ကတော့ မိရင်ဝိုင်းရိုက်ပြီး သေမှစခန်းရောက်တာ။ ဘယ်သူတွေရိုက်မှန်းလည်း မသိဘူး။ အခုဆိုးနေတာက ညမှာ ဓားတွေနဲ့ ၀ိုင်းလုတာပဲ။ အရင်လက ည ၉ နာရီလောက်မှာ လုံးခင်းမှော်ဆီဇာဘက်မှာ ၀ိုင်းလုပြီး အသတ်ခံရသေးတယ်။ လုယက်တာက အမြဲဖြစ်နေတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ဖားကန့်ဒေသသည် ကချင်ပြည်နယ်၏ အကြီးမားဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါး ဈေးကွက်အဖြစ် တည်ရှိနေပြီး ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား သိန်းနှင့်ချီ နေထိုင်သည့် ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှုခင်းကြီးများလည်း မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ပြီး တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင် နေရကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ဆိုသည်။
Posted in CrimeTagged ဖားကန့်, လုယက်မှုLeaveaComment on ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် သေနတ်ပြပြီး iPhone နှစ်လုံး လုယူမှုဖြစ်ပွား
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် လုယက်မှု ကျုးလွန်သူအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးစဉ် ဓားဖြင့်ပြန်လည် ခုခံသဖြင့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ရာ လုယက်သူသေဆုံး
Posted on July 28, 2018 July 29, 2018 by သီဟအောင်
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် လုယက်မှုကျူးလွန်သူ အမျိုးသားအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးစဉ် ဓားဖြင့်ပြန်လည် ခုခံသဖြင့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ရာ လုယက်သူ သေဆုံးမှု ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဇူလိုင် ၂၈ ရက် နံနက် ၁ နာရီခန့်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ် အတွင်းရှိ စက်မှုဇုန်မှ လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းဖြစ်သူ ဦးနိုင်လင်းသည် အလုပ်မှ နေအိမ်သို့ ပြန်လာစဉ် စက်မှုဇုန်(၂) ဦးရွှေအိုးလမ်းသို့ အရောက်တွင် လူတစ်ဦးက ၎င်း၏လည်ပင်းအား ဓားဖြင့်ထောက်ပြီး ငွေကျပ်နှစ်သောင်းအား လုယက်ပြီး ထွက်ပြေးခဲ့သဖြင့် ဦးနိုင်လင်းက သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းသို့ သွားရောက် တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လုယက်မှု ကျူးလွန်သူအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်ရာ စက်မှုဇုန်(၃) ဦးမြဲလမ်းတွင် လုယက်မှု ကျူးလွန်သူအား ဓားကိုင်ဆောင်ထားသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က အသာတကြည် အဖမ်းခံရန် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း လုယက်မှု ကျူးလွန်သူမှာ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် အရိုး အသွား ၁၀ လက်မခန့်ရှိဓားဖြင့် ခုခံရန်ပြုသဖြင့် ရဲတပ်ကြပ်တစ်ဦးက MA13 မောင်းပြန်သေနတ်ဖြင့် တားဆီးကာကွယ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုစဉ် လုယက်မှုကျူးလွန်သူမှာ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးအား ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်စေရန် ရန်ပြုတိုက်ခိုက်လာသဖြင့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လုယက်မှု ကျူးလွန်သူမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာ ရရှိသဖြင့် လှိုင်သာယာဆေးရုံသို့ တင်ပို့ကုသစဉ် ဆေးရုံ၌ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး လုယက်မှု ကျူးလွန်သူမှာ ဆန်းလင်းဦး (၂၅ နှစ်) ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ပြစ်မှုကျူးလွန်သူက ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထဲမှာ ရန်ကုန်ရဲအက်ဥပဒေနဲ့ ထောင်နှစ်လကျဖူးတယ်။ ပြီးတော့ ၂၀၁၈ ထဲမှာ သီရိမင်္ဂလာဈေးထဲမှာ ဓားကိုင်ဆောင်ပြီး ရမ်းကားလို့ လက်နက်များ အက်ဥပဒေ ၁၉ (င)နဲ့ ထောင်လေးလကျပြီး ပြီးခဲ့တဲ့သုံးရက်ကမှ ထောက်က လွတ်လာတဲ့သူပါ” ဟု မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဓားဖြင့် ထိုးခံရသဖြင့် ရဲတပ်ကြပ်ကြီးမှာ ၀ဲလက်ခုံတွင် ဓားဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged ရန်ကုန်, လုယက်မှုLeaveaComment on လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် လုယက်မှု ကျုးလွန်သူအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးစဉ် ဓားဖြင့်ပြန်လည် ခုခံသဖြင့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ရာ လုယက်သူသေဆုံး
Posted on July 26, 2018 July 27, 2018 by သီဟအောင်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်သုံးမြို့နယ်အတွင်း ဆိုင်ကယ်အသုံးပြုပြီး လုယက်မှု ၂၂ မှု ကျုးလွန်သူလေးဦးအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ဇူလိုင် ၂၆ ရက်တွင် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဇူလိုင် ၁၅ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် မ….သည် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနှင့်အတူ စက်ဘီးစီး၍ ဒဂုံမြောက်မြို့နယ် ၁၆ ရပ်ကွက်ရှိ မြို့ဦးစေတီသို့သွားစဉ် နတ်စင်မှတ်တိုင်အရောက်၌ အနောက်မှ လူငယ်သုံးဦးစီးလာသည့် ဆိုင်ကယ်မှ ၎င်းတို့အနီးကပ်လာပြီး စက်ဘီးရှေ့ခြင်းအတွင်း ထည့်ထားသည့် လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် ပိုက်ဆံအိတ်အား လုယူထွက်ပြေးခဲ့သည်။ ယင်းသို့ လုယူထွက်ပြေးခဲ့သဖြင့် မ….က ပတ်ဝန်းကျင်အား အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းရာ ပြည်သူများက ၀ိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးသဖြင့် ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှ စည်သူထွန်း (ခ) စည်သူအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ကျန်နှစ်ဦးမှာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထွက်ပြေးသွားသည့်နှစ်ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်ရာ အခင်းဖြစ်ပွားသည့်ညပိုင်း၌ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၈၇ ရပ်ကွက်၌ သက်ပိုင်ထွေးနှင့် သရဲလေးတို့အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးမိသည့် စည်သူထွန်း၊ သက်ပိုင်ထွေးနှင့် သရဲလေးတို့အား ရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးရာ လုယက်မှုများ ကျုးလွန်ရာတွင် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်နေ မြင့်ဝင်းဆိုသူလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
မြင့်ဝင်းအား ဇူလိုင် ၁၉ ရက်တွင် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၈၇ ရပ်ကွက်အတွင်း၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့လေးဦးမှာ ဧပြီ၊ မေ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်လများက ဆိုင်ကယ် အသုံးပြုပြီး ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ပဲခူးမြစ်လမ်းမပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်နေသူ အမျိုးသားတစ်ဦးထံမှ လက်ကိုင်ဖုန်း တစ်လုံး၊ စက်ဘီးစီးနေသူ အမျိုးသမီးထံမှ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတို့အား လုယက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့လေးဦးမှာ အဆိုပါလများအတွင်းက ဒဂုံအရှေ့မြို့နယ် စက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ မက္ခရာမင်းသားကြီးလမ်းမပေါ်တွင် စက်ဘီးစီးနေသူ အမျိုးသမီးထံမှ ရွှေဆွဲကြိုး၊ ရွှေဆွဲသီး၊ ရွှေလက်ကောက်နှင့် ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးတို့နှင့် ဖုန်းလုယက်မှုရှစ်မှုအား ထပ်မံကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged လုယက်မှုLeaveaComment on ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်သုံးမြို့နယ်အတွင်း ဆိုင်ကယ်အသုံးပြုပြီး လုယက်မှု ၂၂ မှု ကျုးလွန်သူလေးဦးအား ဖမ်းဆီးရမိ
အငှားယာဉ်မောင်းပါ နှစ်ဦးက အမျိုးသမီးဆရာဝန်တစ်ဦးကို ရိုက်နှက်၍ လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် ငွေများလုယက်မှု တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွား
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ အငှားယာဉ်တစ်စီးပေါ်တွင် အမျိုးသမီးဆရာဝန်တစ်ဦး ကို အငှားယာဉ်မောင်းပါ နှစ်ဦးက ရိုက်နှက်၍ လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် ငွေများကို လုယူထွက်ပြေးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဇူလိုင် ၂၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဇူလိုင် ၂၁ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (၄) ရပ်ကွက်နေ ဒေါက်တာ ……. (၃၈) နှစ်သည် ယင်း မြို့နယ် ဝေဇယန္တာလမ်းမကြီးထောင့် တစ်နေရာ၌ ယာဉ်ငှားရန်အတွက် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် အနက်ရောင် တီရှပ်၊ ကွာတားဘောင်းဘီ ၀တ်ထားသော အမျိုးသားတစ်ဦးက အငှားယာဉ် တစ်စီးကို မောင်းနှင်ကာ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ရောက်ရှိလာပြီး အဆိုပါ အငှားယာဉ်မောင်း အမျိုးသားက ယာဉ်အား ငှားမလားဟု မေးသဖြင့် ဒေါက်တာ……..က အလုံမြို့နယ် ဗဟိုအမျိုးသမီး ဆေးရုံကြီးသို့ ကျပ် ၃၅၀၀ ဖြင့် ငှားရမ်းခဲ့၍ ယာဉ်၏ နောက်ခန်းမှ လိုက်ပါ စီးနင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ငှားရမ်းစီးနင်း လိုက်ပါလာခဲ့ပြီးနောက် ယာဉ်မောင်းအမျိုးသားက အိမ်တွင် ပစ္စည်းဝင်ယူရန် ရှိသည်ဟု ပြောဆိုပြီး ဝေဇယန္တာလမ်းမကြီးမှ (၃) ရပ်ကွက်အတွင်းသို့ ချိုးကွေ့မောင်းနှင်ခဲ့ကာ ငွေကြာယံ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့ (၁၃) လမ်း အရောက်တွင် ယာဉ်အား ရပ်၍ ယာဉ်နောက်ခန်းသို့ ကူးလာကာ ဒေါက်တာ…….၏ လည်ပင်းအား ညှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“တရားလို ဆရာဝန်မရဲ့ တိုင်တန်းချက် အရတော့ သူ လည်ပင်းညှစ်ခံနေရတဲ့ အချိန်မှာ အခြားအမျိုးသမီး တစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာပြီး ဆရာဝန်မရဲ့ မျက်လုံးကို ပိတ်တယ်လို့ သိရတယ်။ ပြီးတော့ ယာဉ်မောင်း အမျိုးသားက အလူမီနီယံချောင်းရိုက်ပြီး လက်ဝတ်ရတနာနဲ့ ပိုက်ဆံတွေ လုယူတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာဝန်မကို ကားပေါ်က ဆင်းခိုင်းပြီး ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းက ရဲတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ကျူးလွန်သူတွေကို အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရမိဖို့ စုံစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယင်းသို့ ရိုက်နှက်လုယက် ခံရမှုကြောင့် ဒေါက်တာ……. မှာ နဖူး၊ ဦးခေါင်းတို့တွင် ဖူးရောင်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ပြီး သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ရကာ ၎င်းဝတ်ဆင်ထားသည့် ကျောက်စိမ်းလော့ကတ်သီးပါ ရွှေဆွဲကြိုး တစ်ကုံး၊ စိန်နားကပ် တစ်ရန်နှင့် ကိုင်ဆောင်ထားသည့် လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံး၊ ကျပ် ၅၀၀၀၀ တို့ ပါသွားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ကို ဒေါက်တာ……က တောင်ဥက္ကလာပ မြို့မရဲစခန်းတွင် တိုင်တန်းအမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး ရဲစခန်းက (ပ) ၈၁၈/၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၉၄/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ ဖမ်းဆီး ရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged လုယက်မှုLeaveaComment on အငှားယာဉ်မောင်းပါ နှစ်ဦးက အမျိုးသမီးဆရာဝန်တစ်ဦးကို ရိုက်နှက်၍ လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် ငွေများလုယက်မှု တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွား
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ လမ်း ၆၀ နှင့် သိပ္ပံလမ်းထောင့်တွင်​ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဓားခုတ်မှုအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မနောကြာဖြူ လူမူကူညီရေးအသင်း)
မန္တလေးမြို့တွင် နေအိမ်အတွင်း ဓားကိုင်ဝင်ရောက်ကာ ဆိုင်ကယ်ခိုးမှုများ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး မေ ၂၂ ရက် တစ်ရက်တည်းမှာပင် ဓားခုတ်လုယက်မှု သုံးခုဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မေ ၁၂ ရက်က ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ၃၄ လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကြား၊ ၈၅ လမ်းနှင့် ၈၆ လမ်းကြားရှိ နေအိမ်တစ်ခုတွင် ခြံဝင်းတံခါး သော့မခတ်မိသောကြောင့် ထိုင်းအမျိုးအစား ဆိုင်ကယ် Scoppy ငါးစီး (စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ကျပ် ၈၂ သိန်းကျော်) ပျောက်ဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ထိုသို့ နေအိမ်တစ်အိမ်ထဲမှ ဆိုင်ကယ်ငါးစီး ခိုးယူခံရမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် မန္တလေးမြို့ နေအိမ်တစ်ခုအတွင်း ဓားကိုင်ဆောင်ထားသည့် အမျိုးသားခြောက်ဦး ၀င်ရောက်ပြီး ဆိုင်ကယ်ခိုးယူမှု ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ အုပ်စုလိုက် ဓားကိုင်ပြီး ခိုးယူမှု မူဗီဖိုင်မှာ လူမှုကွန်ရက်တွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့ရာ ယင်းသို့ဓားကိုင်ခိုးယူမှုမှာ အိမ်ရှင်သာ နိုးလာပါက ပြန်လည် ရန်ပြုနိုင်သောကြောင့် မြို့သူမြို့သားများ အနေဖြင့် စိုးရိမ်မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“တစ်အိမ်တည်း ဆိုင်ကယ်ငါးစီး ပျောက်တာရော၊ အင်တာနက်မှာ တက်လာတဲ့ ဓားကိုင်ဆိုင်ကယ် ခိုးယူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်ကယ် ၁၈ စီးနဲ့ အမျိုးသား ခြောက်ဦးကို ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ အခုဖမ်းမိတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေထဲမှာတော့ အဲဒီဖြစ်စဉ်က ဆိုင်ကယ်တွေ မပါသေးဘူး” ဟု အမှတ်(၆) ရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ်ခင်သန်းက ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ ဓားများဖြင့် အိမ်တွင်းဝင်ရောက် ခိုးယူသူ ခြောက်ဦးနှင့် ပတ်သက်၍ မသင်္ကာသူများကို ခေါ်ယူစစ်ဆေး နေသည်ဟုလည်း မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးထံမှ သိရသည်။
ထို့ပြင် မေ ၂၂ ရက် နံနက် ၁ နာရီ မထိုးမီကလည်း ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် လမ်း ၆၀ နှင့် သိပ္ပံလမ်းထောင့်တွင် ဆိုင်ကယ်ရပ် စကားပြောနေသည့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့နှစ်ဦးထံ အမည်မသိ အမျိုးသား ခြောက်ဦး ရောက်ရှိလာပြီး အသင့်ပါလာသည့် ဓားဖြင့်ခုတ်ကာ ငွေနှင့်ဖုန်း ယူဆောင်သွားသည့်ဖြစ်စဉ်၊ အဆိုပါ ဓားကိုင်ဆောင်ထားသည့် လူငယ်ခြောက်ဦးမှပင် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၆၈ လမ်းနှင့် ၄၃ လမ်းထောင့်တွင် ဆိုင်ကယ်ရပ်၍ အပေါ့သွားနေသည့် လူငယ်နှစ်ဦးအား ဓားဖြင့်ခုတ်ကာ ငွေများယူဆောင်သွားသည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ၅၆ လမ်းနှင့် အောင်ဆန်းလမ်းထောင့်ရှိ သန်းတစ်ရာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ စားပွဲထိုးကလေးများကို ဓားရှည်ဖြင့် ခုတ်သွားသည့်ဖြစ်စဉ် သုံးခုဆက်တိုက် ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အောင်ပင်လယ်ရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ “လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က စားပွဲထိုးကလေးနှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ မစိုးရိမ်ရပါဘူး။ ကျူးလွန်သူတွေကို ကျွန်တော်တို့ စုံစမ်းရှာဖွေနေပါတယ်။ အဲဒီဓားကိုင်တဲ့ ခြောက်ဦးပဲ တခြားမြို့နယ်နဲ့ တခြားစခန်းအပိုင်မှာ ဓားကိုင်လုသွားကြသေးတယ်လို့တော့ သိရတယ်။ ကျွန်တော့်စခန်း အပိုင်ထဲက ဖြစ်စဉ်ကတော့ အမှုဖွင့်ထားပါတယ်” ဟု ရဲအုပ်ခင်ဇော်က ပြောကြားသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အဆိုပါဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားနေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်များကို မေးမြန်းရာ မန္တလေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကြီး မျိုးအောင်က “တိုင်းခရိုင်မှုကူဌာနတွေ အနေနဲ့ရော၊ စခန်းတွေကရော ဆိုင်ကယ်ခိုးမှုတွေ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားတာ ရှိပါတယ်။ ခိုးမှုတွေ ထပ်မဖြစ်အောင် ညဉ့်ဦးညဉ့်နက် လှည့်ကင်းတွေလည်းတိုးပြီး ပိုမိုလုံခြုံရေးရယူ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လုံခြုံရေး ရယူနေပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ ဓားကိုင်ကျူးလွန်သူများကို ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မြို့နယ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းများတွင် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in Crime, HeadlineTagged ဓားခုတ်မှု, မန္တလေး, လုယက်မှုLeaveaComment on မန္တလေးမြို့တွင် နေအိမ်အတွင်း ဓားကိုင်ဝင်ရောက်ပြီး ဆိုင်ကယ်ခိုးမှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး မေ ၂၂ ရက် တစ်ရက်တည်းမှာပင် ဓားခုတ်လုယက်မှု သုံးမှု ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွား
Posted in Crime, NewsTagged လုယက်မှုLeaveaComment on ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်၌ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ဆွဲကြိုးကို လူငယ်တစ်ဦးက နေ့ခင်းကြောင်တောင် ဖြတ်လုမှုဖြစ်ပွား
Posted on February 27, 2018 March 1, 2018 by Eleven Media Group
ပရိုဘောက်စ်ယာဉ်အသုံးပြု၍ ခရီးသည်များထံမှ အုပ်စုဖွဲ့ ခါးပိုက်နှိုက်မှုကျူးလွန်သူ ငါးဦးကို မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ခါးပိုက်နှိုက်အဖွဲ့ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နံနက်ပိုင်းတွင် ရဲတာဝန်ရှိသူများက သတင်းအရ သွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျူးလွန်သူများဖြစ်သည့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ ကျော်လွင် (၂၉ နှစ်) နှင့် အောင်မျိုးသူ (၂၁ နှစ်) ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နေ ဟိန်းလတ်ကျော် (၃၈ နှစ်)၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်နေ အောင်မင်းထွန်း (၄၉ နှစ်)နှင့် ဇင်ဘိုဝင်း (၂၆ နှစ်) တို့ငါးဦးကို Oppo အမျိုးအစား လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
၎င်းတို့အားစစ်ဆေးရာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နံနက်တွင် ခါးပိုက်နှိုက်ရန် YBS ၈၄ ခရီးသည်တင်ယာဉ်ကို မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ၄၁ ရပ်ကွက်၊ အကြော်တဲမှတ်တိုင်မှ စီးနင်းခဲ့ကြပြီး နာရီစင်မှတ်တိုင်အနီးအရောက်တွင် ယာဉ်ပေါ်ပါအမျိုးသားထံဦး၏ Oppo အမျိုးအစား လက်ကိုင်ဖုန်းကိုနှိုက်ယူ၍ နာရီစင်မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းကာ ယင်းမှတ်တိုင်တွင် အသင့်စောင့်နေသည့်ယာဉ်ဖြင့် ထွက်ပြေးခဲ့သည်ဟု ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့ငါးဦးအား ထပ်မံစစ်ဆေးရှာဖွေရာ လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးလုံး၊ လွယ်အိတ်ငါးလုံး၊ ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံး၊ ငွေကျပ် ၂၅၀၀၀၊ ရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကိုး၊ ရွှေဆွဲသီးတစ်ခု၊ ရွှေနားကပ်တစ်ဖက်တို့ကို ထပ်မံတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှ ၎င်းတို့ငါးဦးအား မြောက်ဒဂုံမြို့မရဲစခန်းက (ပ) ၄၈၉/၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၉ (နှိုက်)ဖြင့် အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged ခိုးမှု, လုယက်မှုLeaveaComment on ပရိုဘောက်စ်ယာဉ်အသုံးပြု၍ ခရီးသည်များထံမှ အုပ်စုဖွဲ့ ခါးပိုက်နှိုက်မှု ကျူးလွန်သူငါးဦးအား မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိ
ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသူတစ်ဦး၏ ဒေါ်လာများပါသော ကျောပိုးအိတ်ကို အုပ်စုဖွဲ့လုယက်သူ လေးဦးအား ဖမ်းဆီးရမိ
Posted on February 23, 2018 February 24, 2018 by Eleven Media Group
ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသူတစ်ဦး၏ ဒေါ်လာများပါ ကျောပိုးအိတ်ကို အုပ်စုဖွဲ့ လုယက်သူလေးဦးအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဗဟန်းမြို့နယ် စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၏ မန်နေဂျာဖြစ်သော ဂျပန်နိုင်ငံသူ Mrs… (၂၆ နှစ်) သည် သူငယ်ချင်းဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသူ တစ်ဦးနှင့်အတူ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်၊ နံနက် ၄ နာရီခန့်တွင် နေအိမ်သို့ပြန်ရန် ယင်းမြို့နယ်၊ ရေတာရှည်ရပ်ကွက်၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းဘေးရှိ ကမ္ဘောဇဘဏ်ရှေ့တွင် ကားငှားရန် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် အမျိုးသားသုံးဦးမှာ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ၎င်းတို့သုံးဦးအနက် တစ်ဦးက ဂျပန်နိုင်ငံသူ အမျိုးသမီး၏ လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ချုပ်ထားပြီး ကျန်နှစ်ဦးက စုစုပေါင်း ကျပ် ၁၁ သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ မြန်မာငွေစက္ကူ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း တစ်လုံး၊ ပတ်စ်ပို့စာအုပ် တစ်အုပ်ပါ ဂျပန်နိုင်ငံသူပခုံးတွင် လွယ်ထားသည့် ကျောပိုးအိတ်ကို လုယက်ကာ အနီးတွင်ရှိသည့် အငှားယာဉ်ပေါ်သို့တက်၍ ထွက်ပြေးမောင်းနှင် သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လုယက်ခံရမှုကို ဂျပန်နိုင်ငံသူက ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားခဲ့ပြီး ရဲစခန်းက (ပ)၁၂၇/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ- ၃၈၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ ကျူးလွန်သူများ ဖမ်းဆီးရမိရေး စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့စုံစမ်းရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ယာဉ်၏အမျိုးအစားနှင့် ယာဉ်နံပါတ်ကို သိရှိခဲ့ရပြီး အဆိုပါယာဉ်အား ပိတ်ဆို့ရှာဖွေရာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် ည ၇ နာရီခန့်တွင် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် အသင်းတိုက် မှတ်တိုင်အနီး၌ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ ယာဉ်မောင်း စည်သူအောင် (ခ) စည်သူ (၂၄ နှစ်)နှင့်အတူ ယာဉ်အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စည်သူအောင်(ခ)စည်သူအား ဆက်လက်စစ်ဆေးရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်နေ ကျော်သက်နိုင်(ခ) ကျော်လေး (၁၉ နှစ်)၊ သီဟကျော်(ခ)ဖိုးသား (၂၂နှစ်) နှင့် အင်းစိန်မြို့နယ်နေ ဇွဲကိုကို(ခ)ဇွဲ (၁၇နှစ်) တို့ ပါဝင်ကြောင်းသိရပြီး ၎င်းတို့ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်၊နံနက် ၄ နာရီခွဲခန့်တွင် ကြည့်မြင့်တိုင်မြို့နယ် စက်ဆန်းရပ်ကွက်အတွင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အား စစ်ဆေးရာ အဆိုပါပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု ၀န်ခံထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှ ကျောပိုးအိတ်အတွင်းပါ သက်သေခံပစ္စည်းများကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရမိပြီး ၎င်းတို့ကို အခြားပြစ်မှုများ ကျူးလွန်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆက်လက်စစ်ဆေး လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged ရန်ကုန်, လုယက်မှုLeaveaComment on ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသူတစ်ဦး၏ ဒေါ်လာများပါသော ကျောပိုးအိတ်ကို အုပ်စုဖွဲ့လုယက်သူ လေးဦးအား ဖမ်းဆီးရမိ